အင်္ဂလန်ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲရလာဒ်များကို လစဉ်လတိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ပေးလေ့ရှိပါသည်.. ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီ ၈ရက် ၁၄:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ငွေကြေးမူဝါဒပြောင်းလဲရန်အလားအလာမရှိဟု ခန့်မှန်းထားကြပါသည်. စောင့်ကြည့်ရမည့်အဓိကအချက်မှာ ငွေကြေးမူဝါဒကော်မတီဝင်များ၏ မဲပေးမှုအခြေအနေကို သတိထားစောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်.
အဖွဲ့ဝင်များ၏ အတိုးနှုန်းတင်ရန်မဲပေးသူအရေအတွက်, အတိုနှုန်းလျှော့ချရန် - အတိုးနှုန်းမပြောင်းလဲရန်မဲပေးသူအရေအတွက်ကို စစ်စတမ် X-X-X မှ ပြသပေးမည်ဖြစ်သည်. ထို အမျိုးအစားသုံးမျိးတွင်မဲပေးသည့် မဲအရေအတွက်နှင့် ယခင်မဲပေးခဲ့သည့်အရေများအတွက်များကို နှိုင်းယှသ်ပြီး နောင်လာမည့် မဲပေးပွဲကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်. နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒှီဇင်ဘာမဲပေးပွဲတွင်မူ အားလုံးက အတိုးနှုန်းကိုမပြောင်းလဲရန်မဲပေးခဲ့ကြသောကြောင့် စတာလင်ပေါင်ငွေလဲနှုန်း အေးနေခဲ့ပါသည်. ယခုတစ်ကြိမ်တွင် သုံးလပတ် ငွေဖောင်းပွမှုဒေတာကိုပါ ထုတ်ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ရာ GBPငွေလဲနှုန်း သိသိသာသာ လှုပ်ခတ်မည်ဖြစ်ပါသည်.